I-Huawei: i-United States iphakamisa i-veto kwinkampani | Iindaba zeGajethi
I-United States iphakamisa i-veto kwi-Huawei, ngoku kuyakwenzeka ntoni?
Ngaphezu kwenyanga edlulileyo kwabhengezwa oko I-United States ivale iHuawei. Urhulumente waseMelika Utyhola umenzi owaziwayo wase-China wobuntlola nokuba sisisongelo kukhuseleko lwesizwe. Ngenxa yale bhloko, uphawu lwathintelwa ekusebenziseni izinto okanye iinkonzo ezivela kwiinkampani zaseMelika. Oko kwakuthetha ukuba, phakathi kweminye imiba, ukuba uphawu alunakho ukusebenzisa i-Android kwiifowuni zabo.
Ukusukela esi sibhengezo, bekukho zonke iintlobo zeendaba malunga nokuza kwenzeka. Nangona ukubakho kwe- isivumelwano phakathi kwe-United States ne China igcinwe iphila ngamaxesha onke. Yinto efumene ukubambeka ngenxa ye-G20 ebibanjwe kule mpelaveki eJapan. Okokugqibela, i-veto ekwiHuawei iphakanyisiwe.
I-China kunye ne-United States badibene kumsitho obuse Japan. Ezinye iincoko ngazo funa ukuqhubeka nothethathethwano ngesivumelwano sorhwebo, esele ikhula iinyanga kodwa ingekafiki. Ngenxa yoko, kuye kwabhengezwa ukuba iirhafu ezintsha eziqale ukusebenza nge-2 kaJulayi ziyarhoxiswa. Ukongeza, le veto kuHuawei iphakanyisiwe. Iindaba ezineziphumo ezininzi.
Kumenzi owaziwayo waseTshayina sisiqabu esikhulu. Ezi ndaba zithetha ukuba banokubuyela emsebenzini, basebenzisane okanye bathethathethane neenkampani zaseMelika. Oko kuthetha ukuba iifowuni zabo zinokuqhubeka nokusebenzisa i-Android njengenkqubo yokusebenza ngalo lonke ixesha, ukongeza ekufumaneni uhlaziyo lwenkqubo yokusebenza. Banokuqhubeka nokusebenzisa ii -apps ezinje ngeWhatsApp okanye iFacebook kwizixhobo zabo. Ukongeza ekusebenziseni izinto zaseMelika, ezinje ngeeprosesa zayo okanye ezinye izinto.
Oku kulungile kwiHuawei. Ngenxa yolu vimba uphawu lwaseTshayina Wayenengxaki enkulu kwimveliso Ezinye zeefowuni zazo, njengeMate X, ifowuni yakho flip. Ukusukela ngaphandle kwento yokuba bebegcina izinto ezininzi, ayisiyonto izinzileyo kwixesha eliphakathi okanye elide. Ke ngoku baya kuba nakho ukuqala kwakhona kwimveliso njengesiqhelo, kanye emva kokuba kubhengeziwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ukuba imveliso yefowuni iza kuncitshiswa. Into abagqibe kuyo ngenxa yokuhla kwabo kwintengiso.
Ukuthengiswa kweefowuni eziphawuweyo bawile malunga neepesenti ezingama-40 kule nyanga iphelileyo. Iimarike ezininzi zibeke ecaleni iifowuni zorhwebo, zingazi ukuba kuzakwenzeka ntoni kwixesha elizayo. Nangona inkampani igcine ukuzithemba kule nkalo ngalo lonke ixesha. Ngapha koko, kwamanye amazwe balungiselela isenzo apho imali ibuyisiwe ukuba uGoogle Play okanye uFacebook ebengasebenzi kwiifowuni. Ke ukusuka kuHuawei baye bazithemba kakhulu malunga noku.
Le veto ihlala de kube ngu-Agasti 19. Yayingumhla wokuphela kwengxoxo yangoku kunye neHuawei. Ke inkampani iya kuba nakho ukusebenzisa izinto ngokwesiqhelo kwakhona ukusuka kulo mhla. Nangona okwangoku banokuthetha-thethana kwakhona ngesiqhelo ngokupheleleyo. Ngokuqinisekileyo le nyanga iya kuba kukuphinda uqalise ubudlelwane kunye neenkampani ezininzi, ekuye kwanyanzeleka ukuba bayeke ukwenza ushishino kule nyanga iphelileyo. Nangona lo mhla kunye nenyani yokuba i-veto igcinwe ingumfuziselo kunokwenyani. Ukusukela ngoku yonke into ibuyela esiqhelweni.
Kwelinye icala, iphakamisa amathandabuzo ambalwa. Enye yazo ibhekisa kwinkqubo yokusebenza ukuba uphawu lwaseTshayina luyaphuhliswa. IHuawei ibisebenza kwinkqubo yayo yokusebenza, enokubizwa ngokuba yi-HongMeng OS. Bekulindeleke ukuba oku kuwa kusetyenziswe kwiifowuni zabo kwaye bade bazivavanya nakwiifowuni zabo. Ukuphela kwe-veto kuya kuthetha ukuba le nkqubo ayizukufikelela kwintengiso.
Nangona okwangoku akhonto iqinisekisiweyo ngento ezakwenzeka ngale nkqubo yokusebenza. Akukho nto ikhankanyiweyo malunga nayo, enyanisweni, uHuawei akakhange aphendule ukuphela kwale veto. Kodwa kuya kufuneka sizibone kwezi veki njengoko inkampani iqala ukucwangcisa ukubuyela kwayo kwintengiso kunye nokuqhelekileyo. Okwangoku inyathelo lokuqala lithathiwe, kwaye yile veto ifikelela esiphelweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-United States iphakamisa i-veto kwi-Huawei, ngoku kuyakwenzeka ntoni?
Ungazisebenzisa njani izitikha zeTelegram kuWhatsApp